गुल्मीका सबै स्थानिय तहमा पुगे बैंक ! गुल्मीका सबै स्थानिय तहमा पुगे बैंक !
गुल्मीका सबै स्थानिय तहमा पुगे बैंक !
सरकारी कामकाजको लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हट्यो !
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा रहेको सनराईज बैंक । तस्बिर : हुमाकान्त/सबलपोस्ट
गुल्मी, २८ कात्तिक । गुल्मीका सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । जिल्लामा रहेका १० गाउँपालिका र दुई नगरपालिकामा विभिन्न बैंक पुगेका हुन् । सबैभन्दा पछि छत्रकोट गाउँपालिकामा असौज १७ गते सेन्चुरी बैैंकको शाखा स्थापनापछि सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगेका हुन ।
सबै स्थानीय तहमा बैंङ्किङ सेवा सुरु भएसँगै गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, विद्यालय, विभिन्न क्लव, सहकारी, आमा समुह लगायतका संघ–सँस्था तथा स्थानीयहरुले गाउँकै बैंकमा खाता खोल्न सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक दुई स्थानीय तहमा सिमित
जिल्लाका फरक–फरक स्थानीय तहमा फरक–फरक बैंकले कारोबार सुरु गरेका छन् । यसअघि सबै स्थानीय तहको कारोबार गर्दै आएको राष्ट्रिय बैंक अब जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा मात्र सिमित भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका र रुरु गाउँपालिकाको कारोबार मात्रै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गर्ने भएको हो । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा असार २५ गतेबाट सनराईज बैंकले कारोबार सुरु गरेको छ । बैंक स्थापना हुँदा नै सवैप्रथम गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलेले खाता खोलेका थिए । अहिले गाउँपालिकाका विभिन्न विद्यालय, क्लव, संघ सस्थाँ, ब्यक्तिहरु गरी ५०० जनाले खाता खोलिसकेको बैंकका प्रमुख ध्र्रुव पोखरेलले जानकरी दिए ।
कालिगण्गडी गाउँपालिकामा कुमारी बैंक लिमिटेडको शाखा स्थापना गरिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ४ पूर्तिघाटबाट बैंकको शाखाले विगत आठ महिनादेखि सेवा दिएको छ । गाउँमै बंैक स्थापना भएपछि गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, संघ–सँस्थाले खाता खोलि कारोबार सुरु गरेको प्रेस संयोजक तिलाचन पाण्डेले जानकारी दिए ।
मालिका र इश्मा गाउँपालिकामा बैंक अफ काठमाडौले सेवा दिएको छ । मालिका गाउँपालिकामा गत भदौ १० गतेबाट र इश्मा गाँउपालिकामा असारबाट बैंकले कारोबार सुरु गरेको हो । गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा ग्लोबल आइएम् बैंकले सेवा दिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा स्थापना भएको बैंकले असारबाट कारोबार सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकामा सेन्चुरी बैंकले कारोबार सुरु गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले खाता खोलेर बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । भने मुसिकोट नगरपालिकामा ग्लोबल बैंक, सत्यवती गाउँपालिकामा एन्. सी. सी बैंक, मदाने गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंक र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा नेपाल बैंकले सेवा दिने भएका छन् ।
विकटमा बैंक–स्थानीय खुसि
मालिका गाउँपालिका जिल्लाकै विकट गाउँपालिका हो । सदरमुकाम तम्घासबाट ७६ किलोमटिर टाढा रहेको गाउँपालिका केन्द्र अर्खबाङ्गबाट पनि सरकारी बैंकिङ्क कारोबार गर्न तम्घास आउनुपथ्र्यो । तर भदौ १० गतेबाट बैंक अफ काठमाडौले गाउँपालिका केन्द्र अर्खबाङ्गमै रही सेवा दिन सुरु गरेको छ ।
गाउँमै सरकारी काम–काजको सेवासहित बैंक स्थापना भएपछि स्थानीय खुसि भएका छन् । यसअघि सानो–सानो कामको लागि पनि तम्घास धाउनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता अब अन्त्य भएको छ । ‘सानो रकम लिन पनि सदरमुकाम तम्घास नै धाउनुपर्ने थियो, त्यसमाथि समयमा काम नै हुदैनथ्यो ।’ स्थानीय देविराम गिरीले भने, ‘अब गाउँमै बैंक भएपछि धेरै सहज भएको छ ।’
त्यस्तै धुर्कोट, मदाने, कालिगण्डगी, चन्द्रकोट, सत्यवती लगायतका विकट क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि बैकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम तम्घास आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । गाउँमै बैंक नहुँदा गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएको योजना कार्यान्वयमा कठिनाई भएको थियो । यस्तो समस्या सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता समितिले खेपेका थिए ।
‘उपभोक्ता समितिको काम गर्दा बजेट निकासा गर्न गाहे परेको थियो, तम्घास जाँदा–आउँदा धेरै रकम सकिन्थ्यो ।’ इश्मा गाउँपालिका ५ रजस्थलका नारायण अर्यालले भने, ‘बैंक यहि आएपछि धेरै सहज हुने भयो ।’
एकै स्थानीय तहमा धेरै बैंक, सरकारी कामकाज एउटैबाट
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पाचँवटा बैंक रहेका छन् । नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र गरिमा बैंक चन्द्रकोटमा छन् । नेपाल बैंक बाहेकका अन्य चारवटा बैंक पहिले नै भएपनि सरकारी कामकाजको लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा स्थापना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले जानकारी दिए ।
सत्यवती गाउँपालिकामा पनि शाइन रेसुङ्गा बैंक पहिलेदेखि नै थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने सरकारी कामकाजको लागि एन्. सी. सी बैंकको शाखा स्थापना गरिएको छ । भदौबाट सत्यवतीको सबै काम एन्.सि.सी.ले गर्दै आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुवर्ण शाहि शेरचनले जानकारी दिइन् ।
मुसिकोट नगरपालिकामा पनि हाल शाइन रेसुङ्गा र ग्लोबल गरी दुई बैंक छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अध्ययन गरिएतापनि अझैसम्म शाखा स्थापना गरिएको छैन । नगरपालिकाको खाता र कारोबार भने ग्लोबल बैंकले गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत घनश्याम न्यौपानेले जानकारी दिए । रुरु गाउँपालिकामा पनि हाल तीनवटा बैंक रहेका छन् ।
कृषि विकास बैंक, शाइन रेसुङ्गा र मेगा बैंक लिमिडेट रुरु गाउँपालिकामा छन् । तर सरकारी कामकाज भने वडा नम्बर ४ बलेटक्सारमा रहेको मेगा बैंकबाट भइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी पन्तले जानकारी दिइन् । ररु गाउँपालिमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको छिट्टै स्थापना हुने र सरकारी कारोबार त्यसैबाट हुने उनले बताइन् ।
मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ सिमलटारीमा पहिलेदेखि नै शाइन रेसुङ्गा बैंकले कारोबार गरिरहेको भएपनि सरकारी कामकाज भने बैंक अफ काठमाडौबाट हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र एक दर्जन बैंकले कारोबार गरिरहेका छन् । जनता बैक, प्रभु, एस्.बि.आई, गरिमा, ग्लोबल, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एन्.आई.सि. एसिया बैंक, गण्डगी विकास बैंक, कृषि विकास बैंक लगायतका बैंक छन् । तर नगरपालिकाको कारोबार भने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट गरिदैं आएको छ ।
गाउँका बैंकका सुविधाप्रति स्थानीय आकर्षित
सदरमुकामका रहेका बैंकका सेवा–सुविधा र बेलाबेलामा आउने विशेष अफर स्थानीय नागरिकले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्ने मात्र हुन् । त्यसको प्रयोग भने गर्न पाउदैनन् । त्यसैमाथि स्थापित भइसकेका बैंकले धेरै स्किम पनि ल्याउदैनन् । तर गाउँमै भर्खर स्थापना भई कारोबार सुरु गरेका बैंकले भने स्थानीयलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्न थालेका छन् ।
धुर्कोट गाउँपालिमा स्थापना भएको सनराईज बैंकमा स्वास्थ्य दुर्घटना बिमा, रेमिटान्स प्राप्त गर्न सकिने, निशुल्क ए.टि.एम. सुविधा, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ सुविधा छ । जसले गर्दा नागरिक खाता खोल्न निकै उत्साहित देखिएको वैकंका शाखा प्रबन्धक ध्रुव पोखरेलले बताए ।
‘शहरमा भन्दा गाउँमै बसेर काम गर्दा निकै आनन्द लाग्यो, किनकि स्थानीय बैंकिङ्क कारोबारप्रति निकै उत्साहित छन् ।’ उनले भने, ‘गाउँमै बैंक भएकोले बैंङ्किक सेवा–सुविधाको उपयोग समेत गर्न पाएका छन् ।’
‘नबिल आई कार्ड’का लागि अब अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने
रुकुम पूर्वका एक हजार घरधुरी केन्द्रिय विद्युत् लाइनको पहुँचमा